Aung Win Hein (Noble): 10/18/09
တစ်ခါတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်း၊
သူဌေးကြီး ဂျွန်ဒီရော့ကဖဲလား ဆိုတာလေ။
သူ့ခေါင်းထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး ငွေအကြောင်းပဲ တွေးနေတယ်။
အမြဲတမ်း ငွေအတွက်ပဲ စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်။
ငါ့ကို ဘယ်သူတွေက လိမ်မလဲ?
ငါ ခိုင်းထားတဲ့ ဘယ်သူတွေက သစ္စာဖောက်သွားမလဲ?
အမြဲ တကြောင့်ကြကြ ဖြစ်နေတော့ သူက ပိုက်ဆံရှိပေမယ့် စည်းစိမ်မခံနိုင်ဘူး။
တကယ်တော့ သူ ဟာငွေကိုမပိုင်၊
ငွေကသာ သူ့ကိုပိုင်ပြီး သူ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်။
စီးပွားပျက်သွားမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ နှိပ်စက်တဲ့အတွက်
စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဆိုတာလိုဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါတွေ ဝင်လာတယ်။
အစာအိမ်က ခံနိုင်ရည်မရှိ ဖြစ်လာတယ်။
အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် နို့နဲ့ပေါင်မုန့်ကလွဲပြီး ဘာမှမစားနိုင်ဘူး။
သူခိုင်းထားတဲ့ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်ဝန်ထမ်းကမှ
သူ့ထက်စားနိုင်၊သောက်နိုင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေနိုင်သေးတယ်။
သူနဲ့သူ့ဝန်ထမ်းကလေး ဘယ်သူက ပိုချမ်းသာသလဲ စဉ်းစားစရာပါ။
ချမ်းသာအောင် လုပ်တာကို အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချမ်းသာလာတဲ့အခါ တစ်ဖက်က အတောမတတ်နိုင်တဲ့ လောဘစိတ်၊
အခြားတစ်ဖက်က ရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှာ ကြောက် တဲ့စိတ်၊
နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်တဲ့အခါ ငွေရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်သွားတတ်တာကို သတိပေးနေတာပါ။
လောဘစိတ်နဲ့ကြောက်စိတ် နှစ်ဖက်ညှပ်တိုက်လို့ ခံနိုင်တဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။
အနည်းဆုံးတော့ ကျန်းမာရေးပျက်စီးသွားမှာ သေချာတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှု အဆုံးရှုံးခံပြီး ရလာတဲ့ငွေဟာ
အရာအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ဖို့ပြောချင်တာပါ။
လူသားတိုင်း ကိုယ်၊စိတ် နှစ်ပါးစလုံး ချမ်းသာရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
“ဒီဆရာဝန်က သူရဲ့ဆေးခန်းထဲမှာ လူအရိုးစုကို ဘာဖြစ်လို့ ချိတ်ဆွဲထားရတာလဲ?”
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး လူနာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။”
နောက်နေ့မှစပြီး လူအရိုးစုကို မတွေ့ရတော့ပါ။ ။